Indawo Yokuzikhupha Egqibeleleyo Phakathi Kwendawo Entle Yendalo - I-Airbnb
Indawo Yokuzikhupha Egqibeleleyo Phakathi Kwendawo Entle Yendalo
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguSaheli
YONKE INDLU YABUCALA, ICOCEKILE KWAYE INCITSHISIWE IINTSHOLONGWANE, INAMAGUMBI ALIQELA, INOMOYA, INEMIFANEKISO EYI-2 3 I-BHK ENEGADI, I-TERRACE, IVERANDA, IVERANDA, ZONKE IZIDLO, I-TOTO YAKHO.
Ebekwe kwindawo ethe cwaka, enamagqabi embindini weSantiniketan, kwimizuzu eyi- ukusuka kwiDeer Park eyaziwayo kunye nomvuzo ophum 'izandla kwindlu kaGqr. Amartya Sen, ikhaya lethu likunika ubutofotofo bezinto onokuzisebenzisa zale mihla kunye nobuhle beholide yakudala phakathi kwendalo.
Indlu yethu enevaranda enamagumbi amabini, eyi-3 BHK yindawo entle yokonwabela ukuhlala kwindawo epholileyo nevuyisayo kunye nosapho kunye nabahlobo apho iindwendwe zinokusela iti yazo yasekuseni kwiveranda ngengca yethu encinci entle okanye zonwabele izimuncumuncu zangokuhlwa everandeni enkulu.
Ithala lethu elithandekayo, elinendawo entle yokubona ukuphuma kwelanga nokutshona kwelanga, yindawo entle yokufaka incwadi oyithandayo okanye ukwenza i-yoga nokucingisisa ukuze ugcakamele eso sixeko.
Indawo eluhlaza, ingoma yeentaka nezokuhlamba elangeni yenza kube yeyona ndawo ipholileyo neholide epholileyo.
*Isidlo sakusasa, isidlo sasemini kunye nesangokuhlwa zifumaneka ngaphandle kokubhataliswa. Nceda uzive ukhululekile ukubuza ukuba ufuna iinkcukacha ezingakumbi
* I-Toto yakho iyafumaneka ukuba ithathwe/yehle, ukujonga indawo, njl.
ngokubhataliswa Ekubeni indlu yethu ifumaneka lula kangaka, zonke iindawo ezinomtsalane zabakhenkethi zinokugutyungelwa ngeenyawo.
Ekhaya lethu, unobunewunewu bezinto zakho zobuqu eziqhutywa ngumboneleli wethu kwaye unokukuthatha ukuba ubuke indawo nanini na ufuna !(uhlawulisa imali eyongezelelweyo)
Kukho i-rickshaw stand ekufutshane.
Ikhaya lethu likufutshane kuzo zombini izikhululo zikaloliwe,
umgama ukusuka kwisikhululo sePrantik yimizuzu eyi-10 ukuya kweyi-20 kwaye
umgama ukusuka kwisikhululo saseBolpur yimizuzu eyi-15 ukuya kweyi-25, kuxhomekeka kwindlela abantu abahamba ngayo.
Umgama ngeenyawo ukusuka kwiindawo ezidumileyo:
I-Deer Park - ngaphantsi kwemizuzu eyi-7 ukuya kwindawo yokungena
epakini IVisva Bharati University (eyasekwa nguTagore) - imizuzu eyi-15
I-Uttarayan (iMyuziyam yaseTagore) – imizuzu eyi-15
Imarike Yokutya - imizuzu eyi-20
I-Poush Mela Ground - imizuzu eyi-25
I-Poush Mela, yenye yezona ndawo zidumileyo zenkcubeko, zasebusika zaseBengal kwaye kufuneka utyelele ubuncinane kanye ebomini bakho!
Kukho iivenkile zokutyela ezininzi/amalungu okutya kufutshane.
Indawo yethu ikwindawo eluhlaza, phantse ingcolile, kufutshane nazo zonke iindawo ezinomtsalane. Sisekufutshane kakhulu nendawo yepaki ye-deer.
Umbuki zindwendwe ngu- Saheli
Sinomntu ohoyayo ohlala nentsapho yakhe kwi-outhouse ngasemva kwendlu kwaye unoxanduva lokugcina indlu kunye nokuhoya iindwendwe zethu ezixabisekileyo ngalo lonke ixesha. Banokukuphekela ukutya okumnandi kwaseBengali ngaphandle kokubhataliswa. Njengenzuzo eyongezelelweyo, ukwangumnikazi we-Toto (isithuthi esisebenza ngebhetri) ekhethekileyo kwi-Santiniketan, apho unokukuqhuba khona ukuze ubuke indawo okanye ngenye indlela (ngokubhataliswa). Isikhululo sokuthatha nokwehla indawo ngoToto nayo iyafumaneka (ngegama elibhatalwayo). Unokukunceda nokuqesha imoto.
Nangona sihlala eKolkata, siyakufowunela okanye sikuthumelele i-imeyile ibe ungasifumana nanini na xa kuyimfuneko.
Sonke siza kuzama ukwenza ukuhlala kwakho konwabise kangangoko kunokwenzeka.
Sinomntu ohoyayo ohlala nentsapho yakhe kwi-outhouse ngasemva kwendlu kwaye unoxanduva lokugcina indlu kunye nokuhoya iindwendwe zethu ezixabisekileyo ngalo lonke ixesha. Banokukup…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bolpur